Antananarivo Renivohitra: Tsy maintsy dobo-drano raha tsy misy fanavaozana ireo foto-drafitrasa sy ny fomba fanao
mercredi, 08 janvier 2020 20:46
Tsy misy miafina ny toetr'andro eto Antananarivo renivohitra sy ny foto-drafitrasa misy ankehitriny.
Efa fantatra mialoha ny ranon'orana, ny rano maloto avy any an-trano, ary ireo rano maloto avoakan'ny ozinina.
Misy 2 tapitrisa eo ny isan'ny mponina eto Antananarivo, ny olona iray dia tombanana mampiasa rano 50 litatra isan'andro, raha tokony 100 litatra raha manana rano an-trano, ka raha ny atsasak'io rano ampiasaina io no very, avy hisasana, avy anasana lamba, fiara... dia mahatratra 2 000 000 *25 litatra izay = 50 000 000 litatra no mila ariana.
Misy no very avy hatrany midina ambanin'ny tany, fa misy kosa no very anatin'ny fanariana ny rano maloto. Raha zaraina 2 koa izay, dia misy 25 000 000 litatra na 25 000m3 izany no tsy maintsy ariana.
Ny ranon'orana kosa dia fantatra fa ny volana janoary dia misy orana 300mm no latsaka eto Antananarivo. Ny dikan'izany dia hoe misy orana 300litatra/m² no latsaka mandritra ny 1volana.
Androany fotsiny dia nisy orana 8mm tamin'ny 3ora ary 12mm no latsaka hatramin'ny 6ora hariva, izany hoe 20mm na 20litatra/m².
Raha 80km² ny velaran'Antananarivo, dia orana mahatratra 20 litatra x 80 000 000m²= 1 600 000 000 litatra (1km² = 1 000 000m²) = 1 600 000m3 no tsy maintsy avoaka androany fotsiny. Izany hoe 60 000 citernes raha nitaomina.
Ny rano anefa tsy mandeha aingana, fa mandeha 1m/s eo raha betsaka, raha ambonin'izay dia manimba ny tatatra izy, ary tsy araky ny tuyau ihany koa, sady misy feo no mitambolina, manimba ny tuyau.
Mazava izany fa io rano io dia tsy tafavoaka ao anatin'ny 24ora.
Izany no ilana ireny toerana tsy azo anorenana fa asiana rano miandrona ireny, toy ny eny amin'ny ranon'Anosy, Masay, Bypass, Betsimitatatra, Ambohitrimanjaka...
Ny antony hitazonana azy amin'ireny, dia ny tsy hivarinan'ny rano aingana be loatra any anaty renirano toa an'i Ikopa na Sisaony satria hanimba zavatra any ambany toerana, ary tsy hanam-potoana ny rano hitsika ao ambanin'ny tany satria mandeha aingana loatra, ka dia hihena ny tahirin-drano ao ambanin'ny tany, ka dia hiamaina ny tany, ary ho kely ny rano amin'ny fotoanan'ny maintany.
Ny fanotofana ireny toerana ireny, toy ny eo amin'ny watter front sy izay fikasana anototra an'i Marais Masay, dia azo antoka fa hiakatra hatrany ny rano eto Antananarivo.
Ny vahaolana, dia ny fanavaozana ireo foto-drafitrasa mamoaka ny rano, ny fanalebeazana ireny lakan-drano toa an'i Andriantany, ny famoronana toerana iandronan'ny rano, bassin de rétention, fandraràna ny fanotofana tany ireny tanimbary isan-karazany ireny.
Tsy atao mahagaga izany ry Besarety, Andravoahangy, Behoririka, Analakely, Anosikely, Ampefiloha, Ambodin'Isotry, Isotry, Petite vitesse, Soarano, Mahamasina, 67ha, Nosibe, Ankorondrano, Alarobia, Soanerana ho difotry ny rano hatrany.
Mila fanavaozana tanteraka ny foto-drafitrasa, ary mila manova fomba fanao ihany koa Antananarivo satria ny pipi sy caca rehetra eto Antananarivo dia alevina ambany tany avokoa ny 90%, WC lavaka, fa tsy manana toerana fanadiovana rano maloto na traitement des eaux usées.
Ny fako ariana etsy sy eroa manetsina tatatra, ny fako eny Andralanitra dia mitsika ao ambanin'ny tany avokoa, mivarina ao anatin'ny tahirin-drano ambanin'ny tany, ka dia samy mihinana ny caca sy misotro ny pipi ntsika avokoa izany isika, na mampihinana maloto ireo olona any amin'ny faritra hafa hivarinan'ireny rano malototsika ireny.